‘स्थानीय तहसंग साझेदारी गरेर आधारशिला कार्यक्रम संचालन गर्दैछौं’ | सहकारी सञ्चार
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) आज ३३ औं स्थापना दिवस मनाउँदै छ । स्थापना दिवसको अवसर पारेर संघले स्थानीय तह (पालिका)हरु संग साझेदारी गरेर संचालन गर्नका लागि तयार पारेको आधारशिला कार्यक्रम शुभारम्भ गर्नलागेको बताउनुहुन्छ अध्यक्ष परितोष पौड्याल । कार्यक्रम मार्फत सहकारीमा वित्तीय अवसर र वित्तीय पहुँच सिर्जना गर्ने तथा उत्पादन प्रणालीमा लाग्न सदस्यलाई प्रेरित गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँको भनाई छ । अहिले प्रविधि विहीन अवस्थामा रहेका पालिकालाई दिने महत्वपूर्ण प्रविधिक औजारकोरुपमा यो कार्यक्रम तयार पारेको उहाँको दावी छ । यसैगरी नेफ्स्कूनले सदस्य संस्थाका ब्यवस्थापकहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट सम्बन्धन लिएर ६ सय घण्टाको तालिम संचालन गर्न लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रस्तुत छ अध्यक्ष पौड्यालसंग कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीबाट सहकारी अभियानमा परेको असर, वित्तीय सहकारीको प्रवर्द्धन , सुशासन, नीतिगत व्यवस्था लगायतका समसामयिक विषयमा सहकारी सञ्चारले गरेको कुराकानीः
कोरोना महामारीका कारण सहकारीको लगानी जोखिममा छ भन्ने चर्चा सुनिन्छ । सदस्य संस्थाहरुको कर्जा असुलीको अवस्था कस्तो छ ?
–सहकारी संस्थाको स्वामित्व र नियन्त्रण सदस्यहरुको हुन्छ । फाईदा पनि सदस्यले लिन्छ । सदस्यबीच कारोबार गर्ने भएकाले समुदायमा आधारित र सुशासनमा बसेका सहकारीमा समस्या आउँदैन । विधि र पद्धति भन्दा बाहिर गएका सहकारीमा समस्या आउन सक्छ । कार्यक्षेत्रको सीमा अनिश्चित छ । सबैलाई सदस्य बनाएर ऋण दिने प्रथा परम्परा चलेको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सहकारीमा आंशिक समस्या आउला । हामीले कर्जा असुली न्यायाधिकरण र कर्जा सूचना केन्द्रको कार्यविधि तयार पारिसकेका छौं । संस्था र आफूले लिएको दायित्व प्रति उत्तरदायी नहुने सदस्यलाई कारबाही हुन्छ । न्यायाधिकरण र सूचना केन्द्र स्थापना भएपछि सहकारीमा समस्या आउँदैन ।
ब्यापार, व्यवसाय, निर्माण, आयात–निर्यात सुस्ताको छ । परम्परागत लगानीका क्षेत्र संकुचित भएको समयमा सहकारीले नयाँ क्षेत्र पहिल्याउने बेला भएन र ?
–नेपालको अर्थराजनीतिको मूल प्रवाह उत्पादन र निर्यातमा नभई, व्यापार र आयातमा आधारित छ । त्यसैले यसको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । हामी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने सामथ्र्यको बस्तु उत्पादन गर्न सक्दैनौं । त्यसैले त्यहाँ हाम्रो पहिचान छैन । हाम्रो श्रम, सिप र सिर्जनाले तयार पारेको गलैंचा, पस्मिना लगायतका बस्तुको पनि विश्व बजारमा क्रमिकरुपमा गुणस्तर कमजोर हुँदै गएको छ । निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने कुरा आएको छैन । नगण्य मात्रामा कृषि उत्पादन निर्यात गर्छौं । आयात र निर्यातबीचको अनुपात फराकिलो छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने, गुणस्तरीय सामान उत्पादन गरेर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने विषयमा सोच बनेन । ब्यापारमा मात्र ध्यान गयो । ब्यापार घाटा कम गर्ने, आन्तरिकरुपमा स्वावलम्बी बनेर निर्यात गर्ने दिशामा रणनीति बन्नुपर्छ । त्यसका लागि ठूलो पुँजी निर्माण र लक्ष्यमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न सहकारीकर्मीहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ ।
मौद्रिक नीति, आर्थिक नीति, वाणिज्य नीति र ब्यापार नीति आधारभूत नीति हुन् । यी चार वटा नीतिमा आधारित भएर राज्यले उद्यमशीलता, स्वरोजगार, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि लक्ष्य केन्द्रित भएर मानिसको सिप क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । यस कर्ममा सहकारीले साझेदारीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । राज्यको संविधान, कानुन र सबै संरचनामा सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने विषय छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले आजको दिनमा पनि सहकारीलाई चिन्दैन । मुलुकमा १७ प्रतिशत वित्तीय करोबार गर्ने सहकारी क्षेत्रप्रति आखा चिम्लेर बसेको छ ।
मौद्रिक नीतिमा सहकारीलाई सानो अंश हालेर सम्बोधन गरिएको छ । विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र हाम्रो अस्तित्व कायम राख्ने सन्दर्भमा राष्ट्र बैंक उत्तरदायी बन्नुपर्छ । हामीले राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्‍याईरहेका छौं, समुदायमा आधारित राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गरेका छौं, निम्म र मध्यम वर्गमाझ वित्तीय पहुँच र उपलब्धताको अवसर सिर्जना गरिरहेका छौं । तर सबभन्दा अधारभूत तहको प्रतिनिधित्व गर्ने सहकारी क्षेत्र साधन श्रोत, प्रविधि र राज्यको पुँजीबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । स्थानीय तहसंग सहकारीको अनुगमन र प्रवद्र्धन गर्ने सामथ्र्य छैन । संघले यसको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । राज्य यो विषयमा उत्तरदायी हुनुपर्छ ।
बचत तथा ऋण सहकारीमा भएको बचत बाहेकको पैसा उत्पादनमा लगानी गर्न मिल्दैन ?
–अहिले सबै सहकारीले बचत ऋणको काम गरिरहेका छन् । जुन संस्था, जुन नाममा दर्ता भएको हो, त्यसले नाम अनुसारको काम गर्नुपर्छ । यसमा सरकारसंग केही असहमती छ । मुख्य कारोबारको ब्यवस्था विरोधाभाषपूर्ण छ । सहकारी संस्थाले उद्देश्य र नाम अनुसारको काम नगरे सम्म उत्पादन प्रणालीको विकास गर्न सकिँदैन । उत्पादन प्रणालीका लागि चाहिने पुँजीको सहजीकरण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले गर्नुपर्छ । अन्तर सहकारी कारोबार गर्ने विषयमा कार्यविधि तयार भईरहेको छ ।
उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि सहकारीमा भएको पुँजीको ब्याजदर महंगो छ । लघुवित्तको ब्याजदर घट्यो, अब सहकारीको कहिले घट्छ ?
–सहकारी र लघुवित्तको पुँजीको श्रोत र योगदानबीच फरक छ । सहकारीले नियमित बचत गर्ने बानीको विकास गरेर सामुदायिक र राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्छ । मानिसमा धन सिर्जना गरेर गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न प्रोत्साहित गर्छ । लघुवित्तलाई बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट राष्ट्र बैंकले पुँजी उपलब्ध गराउँछ । उनीहरुलाई ‘कस्ट अभ फण्ड’ पर्दैन । बचतको जोखिम पनि बहन गर्नुपर्दैन । राज्यले पुँजी उपलब्ध गराउने लघुवित्तले लगानी गर्ने विधा र सहकारीबीच तुलना गर्न मिल्दैन । यी दुई संस्थालाई तुलना गरेर सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्दा न्यायिक हुँदैन । सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण गर्ने कुरा संस्थाको आन्तरिक विषय हो । सन्दर्भ ब्याजदर निर्देशित ढंगले ‘क्याप’को रुपमा लागू गर्न मिल्दैन । सहकारी ऐन र नियमावलीमा एकदमै धेरै छिद्र राखियो । ऐन एकदम झेली ढंगले बनेको छ । यसमा भएका विरोधाभाषपूर्ण विषय संशोधन हुनुपर्छ ।
नेफ्स्कूनको समेत प्रतिनिधित्व रहेको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले अहिले व्याजदर पुनरावलोकन गरिरहेको छ । तपाईंहरुले के सुझाव दिनुभयो ?
–हामीले सातै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी २ सय ७३ ओटा सहकारीबीच सर्वेक्षण गरिरहेका छौं । यसका लागि नीति, विधि पनि बनाएका छौं । यसको प्रारम्भिक रिपोर्ट हामीले महासंघ मार्फत विभागमा प्रस्तुत गरिसकेका छौं । मौद्रिक नीतिले मुद्रा विस्तार गर्ने नीति ल्याएको छ । यसले संकुचित अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्छ । अहिले मानिसहरुले ‘डम्प’ गरेको तरलता विस्तारै बाहिर निस्कदै जान्छ । यसबाट तरलताको सकस पनि आउन सक्छ । अहिले प्रयोगमा रहेको १६ प्रतिशत सन्दर्भ ब्याजदरलाई कायम राख्ने हो भने झमेला उत्पन्न हुँदैन भन्ने राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिको भनाई छ । सैद्धान्तिकरुपमा हामीलाई पनि यो कुरा जायज लागेको छ । अहिले नै ब्याजदर परिवर्तन गर्नुभन्दा पनि केही समय पर्खिएर निर्णय लिनु उचित हुन्छ ।
लकडाउन जारी रहेको समयमा नेफ्स्कूनले सहकारी बैंकसंग सहकार्य गर्ने सहमती गरेको छ । तपाईंहरु कुन–कुन क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ ?
– प्रवद्र्धन र संस्थाको स्तरोन्नतिको ‘पार्ट’मा सहकार्य गर्न खोजीरहेका छौं । जोखिममा परेका संस्थालाई उद्धार गर्नका लागि एक–एक अर्ब रुपैयाँ कोषमा छुट्टयाएका छौं । अप्ठ्यारो परिस्थितिमा बैंक र नेफ्स्कून दुवै मिलेर सहकारी संस्थालाई अभिभावकत्व दिनुपर्छ भनेर सहकार्य गरेका हौं ।
ब्याजदर पनि एउटै बनाउन लाग्नुभएको हो ?
– त्यसो त होईन । केही विषयमा समझदारी गरेका छौं । अन्य विषयमा बजार व्यस्थित हुँदै जाँदा समीक्षा गर्दै जान्छौं ।
सहकारी ऐन, २०७४ ले वित्तीय सहकारीमा जोखिम कम गर्न नेफ्स्कून मातहत स्थिरीकरण कोष रहने व्यवस्था गरेको छ । कोषले कहिले पूर्णता पाउँछ ?
–प्रकृया सुरु गरेका छौं । एकातिर ऐनमा राखेको कुरा सहकारी अभियानले स्वीकारोक्ति नदिने र ऐनमा पनि गोलमटोल ढंगले राखियो । यसमा संशोधनका लागि पहल गरिरहेका छौं । यद्यपि प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न काम सुरु गरेका छौं । यसका लागि आवश्यक कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिँदै छौं । प्रारम्भिक योगदान १० करोड पुगेको छैन । नपुगेको पुँजी राज्यले थपिदिने व्यवस्था छ । भदौ १ गतेबाट काम सुरु गर्नेगरी तयारी गरिरहेका छौं ।
मौजुदा कानुनहरुमा भएको प्रतिकुल व्यवस्थाले गर्दा सहकारीलाई डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर नगदरहित कारोबार गर्न समस्या परिरहेको छ । सहकारीलाई भुक्तानी प्रणालीमा जोड्न कस्तो पहल गरिरहनुभएको छ ?
–मैले राष्ट्र बैंकको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र ई.डी.हरु संग छलफल गरेको छु । उहाँहरुसंग दोश्रो चरणको बहस सकिएको छ । विशेषगरि पी.ई.एस.पी. र पी.सी.ओ. व्यवस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई मात्र दिने व्यवस्था छ । तर निजी क्षेत्रले प्रभावकारी ढंगले कार्य सम्पादन गरिरहेको छैन । डेढ दर्जन पी.ई.एस.पी. लिएर बसेका छन् । उनीहरुको पहुँच भित्र हामी पुग्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले ‘इन्डिपेन्डेन्टली’ काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक छ । पहलकदमी लिन्छौं भनेको छ । अहिले चलिरहेका कुराहरु नियम र विधि संगत छैनन्, कानुनी दृष्टिकोणमा दण्डनीय छन् भन्ने कुरा उठाउनुभएको थियो । यस विषयमा हामी गम्भीर भएका छौं । राज्यबाट लिनुपर्ने स्वीकृति र अनुवन्ध लिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यो विषय अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकका साथीहरुले केही व्यवस्था संशोधन गर्न आवश्यक छ भन्नुभएको छ ।
नेफ्स्कूनले वित्तीय सुशासनको पाटोमा सदस्य सहकारीलाई कसरी पथप्रदर्शन गरिरहेको छ ?
–अभियानको स्वशासन र स्वनियमन प्रवद्र्धन हामीले नै गर्नुपर्छ । यसका लागि केही औजारहरु विकास गरेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एक्सेस ब्राण्ड, मुलुकको मौलिकता अनुरुपको प्रोबेसन र जोखिममा आधारित सुरपरीवेक्षण कार्यक्रम संचालन गरेका छौं । यसैगरी हामीले स्थानीय तह (पालिका)हरु संग साझेदारी गरेर संचालन गर्नका लागि आधारशीला कार्यक्रम ल्याएका छौं । सहकारीमा वित्तीय अवसर सिर्जना गर्ने, वित्तीय पहुँच सिर्जना गर्ने र उत्पादन प्रणालीमा सदस्यलाई प्रेरित गर्ने उद्देश्य रहेको छ । यसैगरी सहकारीको वित्तीय सक्षमता र प्रतिस्पर्धाको विकास गर्ने, स्थायित्व र सुरक्षाको प्रवर्द्धन गर्ने, कुशल व्यवस्थापनको विधि स्थापित गर्ने, सदस्यको सन्तुष्टि र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि लगायतका धेरै ‘डाईमेन्सन’लाई समावेश गरेका छौं । अहिले धेरै पालिकासंग कुनै प्रविधि छैन । पालिकालाई दिने महत्वपूर्ण प्रविधिकोरुपमा यो कार्यक्रम तयार पारेका छौं ।
स्थानीय तह र प्रदेशले सहकारीको नियमनलाई प्राथमिकता दिएको पाईंदैन । नियमनका लागि छुट्टै स्वतन्त्र निकाय आवश्यक परेको हो ?
– मुलुकको संविधान र कानुन अनुसार ‘सेकेन्ड टियर ईन्स्टिट्युसन’ गठन गर्न सम्भव छैन । सरकार एक्लैले नियमन गर्न सक्दैन । तीनै तहको सरकारको केही ‘लिमिटेसन’ छ । अभियानलाई उत्तरदायी बनाउन सकिएन भने अनुगमन प्रभावकारी हुँदैन ।
सहकारीका छाता संघहरुले अभियानका स्वायत्तता र स्वतन्त्रताका लागि काम गरिरहेका छन् । सहकारीका संचालकबाट ठगिएका सदस्यलाई न्याय दिलाउन छाता संघहरुको कुनै भूमिका हुँदैन ?
–हामी नीतिगतरुपमा उत्तरदायी हुँदैनौं । संस्था आफैं उत्तरदायी हुन्छ । प्रारम्भिक संस्थाका मालिक सदस्यहरु हुन् । नियन्त्रण प्रकृयामा उनीहरुनै हुन्छन् । फाईदा पनि सदस्यले लिने हो । संस्थालाई सुशासनमा चलाउने जिम्मेवारी सदस्यको हो । संस्थामा पैसा राखेर वर्षौं सम्म दोहन गर्ने तर संस्था कसरी संचालन भईरहेको छ भन्ने कुरामा हेक्का नराख्ने गलत प्रवृत्ति छ । संस्था प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही नहुने सदस्यहरु अभियानका प्रतिनिधि संघहरुमा आउन योग्य छैनन् । हामी सदस्य संस्थाको प्रभावकारी संचालन, कुशल व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि उत्तरदायी बन्छौं । यसका लागि स्थिरीकरण कोष सुरुवात गरेका छौं । तर संस्था संचालन गर्ने र फाईदा लिने पहिलो जिम्मेवारी सदस्यको हो ।
सदस्यमा सहकारी शिक्षाको अभाव छ । सहकारी र फाईनान्स बीच भिन्नता छुट्टयाउन नसक्ने सदस्यहरुले पनि सहकारीमा कारोबार गरिरहेका छन् । सहकारी शिक्षा दिने काम कस्को हो ?
–राज्यको अकर्मण्यताले यस्तो भएको हो । राज्यले सदस्यलाई सहकारी शिक्षा दिने र संस्था सुशासनमा चले÷नचलेको कुरा प्रवाह गर्ने गरेको छैन । धेरै सहकारीका संचालकहरुको नियत राम्रो हुँदाहुँदै पनि प्राविधिक कुरा नजानेर समस्यामा परेका छन् । राज्यले सहकारीका संचालकहरुलाई प्राविधिक ज्ञान दिने र वार्षिकरुपमा सहकारीको अनुगमन गर्ने काम गरको छैन । राज्य सहकारीको अनुगमन र प्रवद्र्धन गर्न अकर्मण्यताबाट मुक्त हुनुपर्छ ।
राज्यले समस्याग्रस्त सहकारीको छानविन गर्न समिति गठन गरेको छ । तर समितिले साढे दुई वर्षमा पनि कुनै सदस्यलाई पैसा फिर्ता गर्न सकेको छैन । तपाईंले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
–यो समितिको कार्यक्षेत्र स्पष्ट छैन । संघ, प्रदेश वा पालिकामा ? कुनै कुरा व्यवस्थापन गर्दा यस्को दूरगामी प्रभाव के पर्छ, कस्तो उपलब्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा राज्य उत्तरदायी हुनुपर्दैन ? समितिले राज्यको श्रोत उपभोग गर्न थालेको वर्षौं भयो तर के परिणाम ल्यायो त ? परिणाम त केही आएको छैन । यो विषयमा राज्यले सम्वन्धित अभियानलाई उत्तरदायी बनाएर जानुपर्छ ।
सहकारी संघ/संस्थाहरुबीच एकीकरण गर्ने विषयलाई सरकार र अभियान दुवैले उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । तर एकीकरण हुने क्रम एकदमै सुस्त छ नि ?
–भावनात्मक कुरा गरेर हुँदैन । ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुप¥यो । ऐन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भएपछि राज्य व्यवस्था प्रणालीको के उपस्थिति रह्यो र ? संस्थाको भूगोल, कार्यक्षेत्र, कति सदस्यमा कारोबार गर्ने लगायतका विषय ऐनमा छन् । यसलाई कार्यान्वयन नगरी पालिकाहरुले अहिले भटाभट नयाँ संस्था दर्ता गरिरहेका छन् । राज्य किंकर्तव्यविमूढ भएर हेरेर बसेको छ । सहकारी आर्थिक प्रणालीसंग जोडिएको विषय भएकाले अहिले भनेका विषय संघीय सरकारको नीति हुनुपर्छ । सबै स्थानीय तहसंघ सामथ्र्य छैन । मुद्रा प्रवाहको सामथ्र्य स्थानीय तहसंग हुँदैन । यसका लागि बचत तथा ऋण सहकारीको छुट्टै ऐन चाहिन्छ । अहिले प्रदेश स्तरका संघहरु र स्थानीय स्तरका संघहरु सबैले वित्तीय कारोबार गर्ने भनिएको छ । यसरी द्वन्द्वका लागि धेरै ‘स्टेक होल्डर’ बनाउँदा विकराल स्थिति आउन सक्छ । यसलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सकेनौं भने समस्या जटिल बन्न सक्छ ।
नेफ्स्कून आफैंले चाहिँ मुलुकमा कति संख्यामा सहकारी भए ब्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने विषयमा कुनै अध्ययन गरेको छ ?
–त्यस्तो त छैन । वित्तीय समावेशीकरण भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय ‘अजेन्डा’ हो । यसभित्र वित्तीय पहुँच र वित्तीय अवसर पर्छन् । यी कुरा निर्धारण गर्नेगरी सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । प्रभावकारी ठूला संस्थाहरु निर्माण गरेर समुदायमा काम गर्ने विश्व अभ्यास छ । जापानले १५ वर्षे रणनीति बनाएर २६/२७ हजार सहकारीलाई एकीकरण गरेर पाँच/सात सयमा झार्‍यो । क्यानडा र अमेरिकाले पनि त्यस्तै रणनीति अपनाएका थिए । नेपालमा जागरण र सशक्तिकरणको समयमा धेरै संस्था गठन भए । व्यवसायिकता र गुणस्तर सुनिश्चितता कायम हुँदै जाँदा क्रमिकरुपमा संस्थाको संख्या घट्दै जान्छ । तर गुणस्तर सुनिश्चितताको विषयमा राज्य उत्तरदायी हुनसकेको छैन । अवको वित्तीय सहकारी अभियानको दुईटा मात्र बाटो छ । स्तरिकरण र स्थिरीकरण ।
नेफ्स्कूनले लामो समय देखि वित्तीय सहकारीका लागि छुट्टै बचत ऋण ऐन जारी गर्न मार्ग गर्दै आएको छ । अहिले प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
–प्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यूले जारी गर्छु भन्नुभयो । मन्त्रालयले पनि गर्छु भनेको थियो । नगर्ने भन्ने कोही छैन । तर परिणाम कहिले आएन् ।
संघ र प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीलाई कस्तो प्राथमिकता दिएको पाउनुभयो ?
–संघसंग पैसा छ । तर उनीहरुमा वित्तीय सहकारी चाहिँ सहकारी होईनन्, हामीले अनुदान दिनुपर्दैन भन्ने बुझाई छ । अनुदान सम्बन्धी नीति पनि त्यसरी आएको छ । कार्यविधि बन्दै छ । सहकारिताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय वित्तीय समावेशीकरण हो । वित्तीय पहँुच र वित्तीय अवसर सिर्जना नगरी स्तरोन्नति र आर्थिक विकास हँुदैन । यसका लागि संस्था बलियो बनाउनुपर्छ । हामीले पैसा चाहियो भनेको छैन । हामीले तालिम, सिप, क्षमता अभिवृद्धि, भौतिक पूर्वाधारको विकास, डिजिटल फाईनान्सिङमा सहयोग, प्रविधिको विकास लगायतका विषय उठाएका छौं । समष्टिमा हेर्दा यी विषयमा राज्य मूच्र्छित र बेहोस छ ।
नेफ्स्कूनले ३३ औं स्थापना दिवसको अवसरमा के कस्ता कार्यक्रम ल्याउँदै छ ?
–हामीले सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन लिएर पहिलो चरणमा २० जना ब्यवस्थापकलाई ६ सय घण्टा (क्रेडिट आवर)को तालिम दिँदै छौं । आईएलओसंग केही रणनीतिक साझेदारीमा काम गर्दैछौं । मूलत विदेशबाट स्वदेश र सहर बजारबाट गाउँ फर्केका नागरिकलाई पुनःस्थाप गर्नका लागि कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर छलफल चलाईरहेका छौं । प्रविधिविहीन, मार्गदर्शन विहीन, क्षमता विहीन भएर पनि पालिकाले सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपरेको छ । प्रविधि, सिप, पुँजी, क्षमता नभएपनि भोलि तलमाथि हुँदा उत्तरदायित्व प्रमुख, उप–प्रमुख र निर्वाचित प्रतिनिधिको थाप्लोमा आउँछ । हामी उहाँहरुलाई सहयोग गर्न पालिकासंग साझेदारी गरेर आधारशीला कार्यक्रम संचालन गर्दैछौं ।